Fianakaviana nisara-bazana fa hoe nifamosavy
MORAFENO ARIVONIMAMO Nankinina amin’ilay voapanga ho mpanolana ny fitsaboana ilay zazavavy
Rehefa nifandrirarira teny ny raharaha, nandritra ny herinandro maro, ilay lehilahy noheverina fa mpanolana ihany no nanankinana ny fanasitranana ilay zazavavy.
FANAFIHANA MITAM-BASY Jiolahy iray voatifitra, voasambotra ny 6
Fikambanan’olon-dratsy « bande de 10 » mpanao fanafihana mitam-piadiana teto an-drenivohitra no ravan’ny pôlisy,
Eric Fou Hehy : Sitrana soa aman-tsara, efa tafody
Tonga soa aman-tsara eto Madagasikara i Eric ao amin’ny tarika Fou Hehy ary sitrana soa aman-tsara. Taorian’ny nahatontosa ny fandidiana azy tany Inde, ny 20 jolay lasa teo.
HENRI RATSIMBAZAFY Hamintina ny faha-60 taona niakarany an-tsehatra
Hanatanteraka “concert” miavaka eny amin’ny efitrano fandraisana fivoriana iraisam-pirenena eny Ivato i Henri Ratsimbazafy sy ny tariny amin’ny 08 Desambra ho avy izao.
Ilayhira "Hiarakaisika" no nitsenanaan'iDadah,
tamin'nyfahatongavanytetsyamin'nyLapan'nykolontsainatetsyMahamasinaomalyharivatokony ho tamin'ny 4 orateo. Ireompanakantonamany, toa an-dry Lola, Princio, Raboussa, Tonton Pa,
Ankizy sahirana eny amin’ny ONG MANDA Nahazo fampianarana sy fanomezana avy amin’ny mpianatry ny INSCAE
Ankizy sahirana sy kamboty avy eo anivon’ny ONG Manda eny Tsiadana no notsidihana sy nanaovan’ireo andiana mpianatry ny sekoly ambony INSCAE asa sosialy ny faran’ny herinandro lasa teo.
ANKAZOMANGA Zaza 8 taona hianatra, nitsahin’ny kamiao
Nandriaka ny rà. Nitrangana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina teo Tsaramasay Ankazomanga omaly maraina, zazavavy kely mpianatra iray sahabo ho 8 no tra-doza, nikasa handeha hianatra tany Anjanahary.
Rehefa sendrana aretina somary hafahafa izay ny olona iray, indrindra raha saro-sitranina ilay izy, dia mby ao an-tsaina hoe : nisy namosavy. Toy izao ny resadresaka nifanaovana tamin’i Andriamiampy Lovatiana Lovaniaina na Mr Toby, izay nanatona mpitsabo mosa
Jejoo : Tantarao anay hoe : ny momba ilay aretin’ny rafozanao sy ny nataonareo hitsaboana azy?
Mr Toby : Narary amam-bolana maro ny rafozan-dahiko tany Antsirabe ka nentina niakatra taty Antananairivo mba hitady fahasitranana. Nisy narary tao amin’ny tratrany ka rehefa mandrehoka dia misy rà mivoaka.
Jejoo : Nandeha dokotera ve ianareo? Dia inona ilay aretina ?
Mr Toby : Nentina dokotera aloha io rafozako io tany Antsirabe, ary nampanaovina “analyse”. Hita tamin’izany fa homamiadana no nahazo azy.
Jejoo : Taiza izy no nentinareo nony tonga teto Antananarivo ary hafiriana ny fitsaboana?
Mr Toby : Teny Antsimondrano izy no nentinay. Misy mpanotra, mpitsabo mosavy efa fandehanan’ny fianakaviana mantsy teny. Otra no nataon’io mpitsabo io, fa nisy rahavaviny nafarany avy any amin’iny faritra Itasy iny ihany koa nanampy azy, ka “tapakazo” tsy fantatray no nentin’io rahavaviny io nitsaboana ilay rafozako. Naharitra iray volana teo ny fitsaboana.
Jejoo : Inona no niseho afaka iray volana ?
Mr Toby : Vao mainka niha-nihombo ny aretiny dia tsy nety nankeny intsony izahay fa nitady hevitra hafa hitsaboana azy. Mpitsabo mosavy, voalaza hoe : nentim-paharazana teny Atsimondrano teny ihany no nitondranay azy. Ity mpitsabo faharoa ity dia mbola mampiasa “tapakazo” ihany koa.
Jejoo : Nisy fahasitranana ve tany amin’io mpitsabo faharoa io?
Mr Toby : Roa andro fotsiny izahay no teny dia maty ilay rafozako. Tao an-trano izy no maty fa tsy tonga teny amin’ilay mpitsabo intsony.
Jejoo : Ahoana ilay resaka hoe : mifamosavy ianareo mianakavy?
Mr Toby : Mbola nandeha nihotra tany amin’ilay mpitsabo voalohany noresahiko teo ny vadiko, izay bevohoka, sy ny rafozam-baviko ( manala havizanana), ka tamin’izany no nilazan’io mpanotra io fa mosavy no nahavoa ilay rafozan-dahiko maty. Tsy iza, araka ny nambarany hatrany, fa ny fianakaviako (anabaviko sy reniko )no nanao izany. Ny anabaviko sy ny reniko ihany koa anefa mandeha miotra (manala havizanana) eny, ka amin’ireo havako ireo indray izy dia milaza fa ny vadiko sy ny rafozam-baviko dia mamosavy. Ampitondrainy rano kely hafafy any anaty fatsakana sy eny an-tokontany ry zareo. Taty aoriana kely dia narary maso ny zanaky ny anabaviko ka nentina teny dia nolazainy koa fa nataon’olona no nahatonga ilay areti-maso io. Tsy nety nitondra ny zanany teny intsony ilay anabaviko. Na ireo havako na ny vadiko sy ny reniny dia samy noferany tsy hitantara sy hamoaka io resaka mifamosavy io. Raha vao mivoaka, hoy izy, io resaka io, dia hisy faty 07 hivoaka ao anatin’ny fianakavianay, ary izy mahafantatra “gendarme” sy manam-bola, raha toa ka voatonotonona ny anarany.
Jejoo : Manao ahoana ny fiaraha-monina sy ny fifandraisana ao aminareo mianakavy amin’izao fotoana izao?
Mr Toby : Mikorotana tanteraka ny fianakaviana avy aty amiko sy avy amin’ny vadiko. Vao niparitaka io resaka hoe mifamosavy io dia samy tsy nisy nandeha nihotra teny intsony izahay. Ary efa natao foana ny fifampiresahina, satria efa tsapa fa ilay mpitsabo no mampiady anay, kanefa mbola hita misy lonilony eo amin’ny lafim-pianakaviana.
Jejoo : Inona ny hafatra tianao hampitaina amin’ny mpamaky ny gazety jejoo amin’ireo olona mpandeha amin’ireny mpitsabo mosavy ireny?
Mr Toby : Aleo aloha fantarina tsara ny aretina sy ny fomba fitsaboana hataon’ny olona iray vao mandeha amin’ireny karazana mpitsabo ireny. Izahay izao dia nolalaoviny teo foana ary nataony fangalana vola fotsiny, satria tsy latsaky ny 10. 000Ar no omena azy isaky ny mankany, ary indrindra aleo raha misy ny tsy salama, dia ny dokotera avy hatrany no hatonina, dia fantatra amin’ny alalan’ny fitiliana sy ny fizahana isan-karazany ny aretina, dia any no tohizana ny fitsaboana.